စမတ်ဖုန်းတွင် ရောဂါနှင့်ထိတွေ့မှု အသိပေးချက်များ ပို့ပေးသော WA Notify အက်ပ် | Washington State Department of Health
စမတ်ဖုန်းတွင် ရောဂါနှင့်ထိတွေ့မှု အသိပေးချက်များ ပို့ပေးသော WA Notify အက်ပ်
WA Notify(ဒဗျူလူအေ အကြောင်းကြားစာ) (Washington Exposure Notifications(ဝါရှင်တန် ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာများ) ဟုလည်း သိကြသည့်) သည် အသုံးပြုသူများအား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မျှဝေစရာမလိုဘဲ ကိုဗစ်-19 ထိတွေ့မိပါက သတိပေးနိုင်သည့် စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့် အခမဲ့ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ လုံးဝ လျို့ဝှက်ဖြစ်ပြီး သင်ဘယ်သူလဲ သို့မဟုတ် သင်ဘယ်သွားခဲ့လဲကို ခြေရာမခံပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ဖုန်းထဲသို့ WA Notify ကို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။
Phone ပေါ်တွင် ဆက်တင်များ ထဲမှ Exposure Notifications ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Settings (ဆက်တင်များ) သို့သွားပါ
Exposure Notifcations သို့ရောက်သည်အထိ ဆွဲချကြည့်ပါ
“Exposure Notifications ကို ဖွင့်ပါ” ကို ကလစ်လုပ်ပါ
United States (အမေရိကပြည်ထောင်စု) ကို ရွေးချယ်ပါ
၀ါရှင်တန် ကို ရွေးချယ်ပါ
Google Play Store သို့သွားပါ။
WA Notify အက်ပ်စ် ကို ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ပါ။
အန်းဒရွိုက် သို့မဟုတ် အိုင်ဖုန်း ပေါ်တွင် ကျူအာကုဒ်ကို စကန်ဖတ်ပါ။
WA Notify ကို သင်ဖွင့်ထားပါက သင့်ဖုန်းသည် အနီးအနားရှိ WA Notify ဖွင့်ထားသော သူများ၏ ဖုန်းများနှင့် ကျပန်းဖြစ်သော မည်သူမှန်းမသိသော ကုဒ်များကို ဖလှယ်ပါသည်။ အက်ပ်စ်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို-လျို့ဝှက်ပေးသော စွမ်းအင်အသုံးနည်းသော ဘလူးတုခ့် နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး သင့်အကြောင်းအချက်အလက်များကို မဖော်ထုတ်ဘဲ အဆိုပါ ကျပန်းကုဒ်များကို ဖလှယ်ပါသည်။ အခြား WA Notify အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က လွန်ခဲ့သော နှစ်ပတ်အတွင်း သင့်အနီးအနားတွင်ရှိခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် ကိုဗစ်-19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အခြားသူများကို ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ အကြောင်းကြားရန်အတွက် အဆင့်များကိုလိုက်လုပ်ပါ၊ သင့်တွင် ထိတွေ့မိမှုရှိခဲ့ပါက ဘယ်သူဆီကမှန်းမသိသော အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကို ရရှိပါလိမ့်မည်။ ယင်းသို့အားဖြင့် သင့်အနေနှင့်လည်း လိုအပ်သည့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများကို ရစေနိုင်သလို သင့်အနားရှိ အခြားသူများထံ ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးမပျံ့စေရန်လည်း ကူညီနိုင်ပါသည်။
သင့်ကို သတိပေးစရာမလိုသော ကိုဗစ်-19 ကူးစက်နိုင်သည့် ဘေးကင်းသည့် အကွာအဝေး သို့မဟုတ် တိုတောင်းသော အချိန် ပမာဏသာ ရှိသည့် အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ရန် အေလိုဂသမ် တစ်ခုက တွက်ချက်ပေးပါသည်။ သင်သည် ထိတွေ့မိမှုရှိနိုင်မှသာ WA Notify က သင့်ကို သတိပေးပါလိမ့်မည်။ သတိပေးချက်တစ်ခု မရခြင်းသည် သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။
WA Notify ကို ဘာသာစကား 30 ကျော်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် ဝါရှင်တန်တွင် နေထိုင်သူများသည် ဤကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်ခြေပိုများပါလိမ့်မည်။
အိမ်တွင် ကိုဗစ်-19 စစ်ဆေးရလဒ်အရ ပိုးတွေ့သူများအတွက် အတည်ပြုကုဒ်တောင်းခံနည်း
ဆေးကောင်တာမှ စစ်ဆေးသည့် ကိရိယာကို ဝယ်ယူပြီး ကိုဗစ်-19 စစ်ဆေးရလဒ်အရ ပိုးတွေ့သည့် WA Notify(ဒဗျူလူအေ အကြောင်းကြားစာ) အသုံးပြုသူများသည် WA Notifyတွင် အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းဖြင့် အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုကို တောင်းဆိုရန်-
WA Notifyကိုဖွင့်ပြီး “Share your test result to help stop the spread of COVID-19”(ကိုဗစ်-19 ပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်အောင် ကူညီရန် သင့် စစ်ဆေးရလဒ်ကို မျှဝေမည်)” ကို ရွေးချယ်ပါ။
“Continue(ဆက်လုပ်မည်)” ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် “I needacode. (ကျွန်ုပ် ကုဒ်တစ်ခုကို လိုအပ်သည်) ” ကို ရွေးချယ်ပါ။
WA Notify ကို သုံးသည့် သင့် ဖုန်း၏ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် သင်ပိုးတွေ့ရှိသည့် ရက်စွဲကို ရိုက်ထည့်ပါ။
“Send Code(ကုဒ်ပေးပို့ပါ)” ကို ရွေးချယ်ပါ။
Settings(ဆက်တင်) သို့သွားပြီး Exposure Notifications (ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာများ) ကို ဖွင့်ပါ။
“ShareaCOVID-19 Diagnosis(ကိုဗစ်-19 ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိမှု တစ်ခုကို မျှဝေမည်)” ကို ရွေးချယ်ပါ။
“Continue(ဆက်လုပ်မည်) ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် “Didn’t getacode?(ကုဒ်တစ်ခုကို မရရှိခဲ့ပါ) ကို ရွေးချယ်ပါ။ Visit WA State Dept. of Health Website. (ဒဗျူလူအေ ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကို ဝင်ကြည့်ပါ။”
“Continue(ဆက်လုပ်မည်)” ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်သည် ပေါ်လာသော အကြောင်းကြားစာတစ်ခု နှင့် အတည်ပြုကုဒ်ပါသော စာသားမက်ဆေ့ချ်တစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အခြားအသုံးပြုသူများကို ထိတွေ့မိခဲ့နိုင်ကြောင်း မည်သူမျှမသိစေဘဲ သတပေးရန်အတွက် ဒဗျူလူအေ အကြောင်းကြားစာထဲတွင် အဆင့်များကို လိုက်လုပ်ရန်အတွက် အကြောင်းကြားစာကို တို့ရန် သို့မဟုတ် စာသားမက်ဆေ့ချ်ထဲရှိ လင့်ခ်ကို ကလစ်လုပ်ရန်သာ လိုပါသည်။ ဒဗျူလူအေ အကြောင်းကြားစာ တွင် သင့်အတည်ပြုကုဒ်ကို တောင်းဆိုပြီးလျှင် ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်း 1-800-525-0127, ကို ဖုန်းဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပါ ထို့နောက် သင့် ပိုးတွေ့ကြောင်းရလဒ်ကို Department of Health (DOH, ကျန်းမာရေးဌာန) ကို အစီရင်ခံပါ။
သင်သည် WA Notify, ထဲတွင်အတည်ပြုကုဒ်ကို တောင်းဆိုလို့မရခဲ့လျှင် သင်သည် ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်း 1-800-525-0127 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပါ ထို့နောက် ဟော့လိုင်းဝန်ထမ်းအား သင်သည် WA Notify အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပေးသိပါ။ ပိုးနှင့်ထိတွေ့မိနိုင်သော အခြား WA Notify အသုံးပြုသူများကို အသိပေးရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော အတည်ပြုလင့်ခ်တစ်ခုကို ဟော့လိုင်းကိုင်သော ဝန်ထမ်းက ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးကောင်တာမှ ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးသော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ပိုးရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အဖြေကို သိရသည်နှင့် ချက်ချင်း ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်းဖြစ်သော 1-800-525-0127ကို ဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပြီး (စပိန်လိုပြောလိုပါက7ကို နှိပ်ပါ) ဖုန်းဆက်သင့်ပါသည်။ ဟော့လိုင်း နာရီကို သိရှိရန် Contact Us(ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်မည်) စာမျက်နှာ ကို ဝင်ကြည့်ပါ။ ဘာသာစကား အကူအညီများလည်း ရှိပါသည်။
သတိပြုရန်မှာ- WA Notify သည် ထိတွေ့မိကြောင်း အသိပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအား ၎င်းတို့၏ ဆေးစစ်ချက်ရလဒ်များကို ထည့်သွင်းရန် ဒီဇိုင်းမရေးဆွဲထားပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကို ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးထားသလဲ။
WA Notify သည် သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ကာကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဂူဂဲလ် အဲပဲလ် ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာ နည်းပညာကို အခြေခံထားပါသည်။ ၎င်းသည် တည်နေရာ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာများကို ကောက်ယူ သို့မဟုတ် ဖော်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ နောက်ခံတွင်သာ အလုပ်လုပ်ပြီး ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အတွက် သင် သို့မဟုတ် သင်အလုပ်လုပ်သည့်နေရာကို သိရန် မလိုအပ်ပါ။ ဘလူးတုခ့်၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကိုသာ အသုံးပြုထားသဖြင့် သင့်ဘက်ထရီသက်တမ်း ပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ပါ၀င်ခြင်း မပါ၀င်ခြင်းမှာ မိတ်ဆွေ၏ ဆန္ဒအလျောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုတော့ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ကာကွယ်ထားခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သိရှိရန် WA Exposure Notifications ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နှင့် ဆိုင်သော မူ၀ါဒများ ကို ကြည့်ပါ။
သင်လက်ခံရရှိနိုင်တဲ့ အကြောင်းကြားစာ ပုံစံ နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ပိုးရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသူများသည် အတည်ပြုချက် လင်ခ် စာသား မက်ဆေ့ချ် နှင့်/သို့မဟုတ် ပေါ်လာသော အကြောင်းကြားစာ ကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ WA Notify ထိတွေ့မိမှုရှိနိုင်သော အသုံးပြုသူများသည် ထိတွေ့မိကြောင်း အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းအကြောင်းကြားစာများ နှင့် ၎င်းတို့မှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကို ကြည့်ရန် ပိုမိုလေ့လာမည်။
လတ်တလောက University of Washington ၏ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာ အသုံးပြုသူများလေလေ အကျိုးကျေးဇူးရှိလေလေဟု တွေ့ရှိထားပါသည်။ ရလဒ်များတွင် WA Notify သည် ခန့်မှန်းခြေ လူ 40-115 ယောက်၏ အသက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုသည့် ပထမ လေးလအတွင်းတွင် ကိုဗစ်-19 ဖြစ်နိုင်ခြေ 5,500 ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့နိုင်သည်ဟု ပြသခဲ့ပါသည်။ ဒေတာပုံစံတွင် WA Notify ကို အသုံးပြုသည့် လူအနည်းငယ်ပင်ရှိစေကာမူ ကိုဗစ်-19 ကူးစက်ခံရမှု နှင့် သေဆုံးမှုကို လျော့ချနိုင်ပြီး WA Notify သည် ကိုဗစ်-19 ပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု ဟု သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။
WA Notify (ဒဗျူလူအေ အကြောင်းကြားစာ) အကြောင်းကို ကူညီ ဖြန့်ဝေပေးလိုပါသလား။
အထူး မီဒီယာ မက့်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း၊ ပိုစတာများ၊ နမူနာ ရေဒီယို နှင့် တီဗီကြေငြာများပါသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ WA Notify ကိရိယာသေတ္တာ ကို ကြည့်ပါ။
အခြား မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
Washington State Department of Health (DOH, ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန) မှ အကြောင်းကြားစာ နှင့်/သို့မဟုတ် စာသား တစ်စောင် ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲ။
WA Notify အသုံးပြုသူများသည် ထိတွေ့မိနိုင်သော အခြားသူများကို အလျှင်အမြန် နှင့် ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ သတိပေးနိုင်ရန် DOH သည် လတ်တလောတွင် ကိုဗစ်-19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူတိုင်းကို စာသားမက်ဆေ့ချ် နှင့်/သို့မဟုတ် ပေါ်လာသော အကြောင်းကြားစာ တစ်စောင်ကို ပေးပို့ပါသည်။ ၎င်းအကြောင်းကြားစာများ နှင့် ၎င်းတို့မှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကို ကြည့်ရန် ပိုမိုလေ့လာမည်။
နှစ်ခုစလုံးကို သင်လက်ခံရရှိပါက အခြားအသုံးပြုသူများကို ထိတွေ့မိနိုင်ကြောင်း ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ သတိပေးရန် အကြောင်းကြားစာကို တို့လိုက်ရန် သို့မဟုတ် စာသားမက်ဆေ့ချ်ပါ လင့်ခ်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး WA Notify တွင်ပါသည့် အဆင့်များကို လိုက်လုပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးပါက WA Notify ကို လိုအပ်ပါသေးသလား။
လိုအပ်ပါသည်။ သင်သည့် ကိုဗစ်-19 အတွက် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားပြီးလျှင်လည်း ပုံမှန် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသေးသည်။ ကာကွယ်ဆေးများသည် သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ရန် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း သင်သည် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားရသေးသော အခြားသူများကို ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ အနည်းငယ်ရှိနေပါသေးသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသို့ ကျွန်ုပ်၏ WA Notify အချက်အလက် ကို ထည့်၀င်ခြင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး အကြောင်းကြားစာတစ်စောင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲ။
Washington State Department of Health (DOH) သည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် WA Notify အလုပ်ကောင်းကောင်းဘယ်လောက်လုပ်လဲ သိလိုပါသည်။ သင့် WA Notify အချက်အလက်ကို မျှရန် သဘောတူလျှင်လည်း သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ကိုမျှ ကောက်ခံထားခြင်း သို့မဟုတ် မျှခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ သင်ဘယ်သူဘယ်၀ါဖြစ်ကြောင်းလဲ ဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ DOH ကသာ ၎င်းအချက်အလက်များကို ဝင်ကြည့်နိုင်ပြီး ပြည်နယ်အဆင့်တွင်သာ ကြည့်နိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
WA Notify အသုံးပြုသူများက ၄င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို မျှရန် သဘောတူညီပါက မည်သည့်အချက်အလက်များကို စုဆောင်းမည်နည်း။
သင့်အချက်အလက်များကို မျှရန် သဘောတူလျှင်လည်း သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်ကိုမျှ ကောက်ခံထားခြင်း သို့မဟုတ် မျှခြင်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်သဖြင့် သင်ဘယ်သူဘယ်၀ါဖြစ်ကြောင်းလဲ ဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ Washington State Department of Health ကသာ အောက်ပါတို့ပါ၀င်သည့် ၄င်း ပြည်နယ်-အဆင့် အချက်အလက်များကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
WA Notify မှ ၄င်းတို့၏ အချက်အလက်ကို မျှရန်သဘောတူညီသည့် လူအရေအတွက်။ ၄င်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ နမူန သည် ဘယ်လောက်အခြေအနေကို ကိုယ်စားပြုသလဲ သိနိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
WA Notify အသုံးပြုသူများက လက်ခံရရှိသော WA Notify အရေအတွက် ၄င်းက ကိုဗစ်-19 ၏ ပျံ့နှံ့မှုအလားအလာကို သိနိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိတွေ့မှု အကြောင်းကြားစာ ပေါ်တွင် ကလစ်လုပ်သည့် လူအရေအတွက်။ ၄င်းက လူဘယ်လောက်က ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တိုက်တွန်းချက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန် စိတ်အားထက်သန်သလဲ သိနိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူဘေးနားတွင် ရှိနေပြီး ထိတွေ့မိကြောင်း အကြောင်းကြားခံရရန် အနီးကပ်မှု သို့မဟုတ် ကြာချိန်မလုံလောက်သည့် လူအရေအတွက်။ ၄င်းက WA Notify တွင်ထည့်ထားသော ထိတွေ့မှုတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် တွက်နည်းကို ချိန်ညှိရန်လိုမလို စဥ်းစားရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် WA Notify ကို ကျွန်ုပ်၏ အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် ဖွင့်လိုက်လျှင် "Availability Alerts (ရရှိနိုင်မှု သတိပေးချက်) ” အတန်းကို ဖွင့်ထား သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသင့်သလား။
ပိတ်ထားလဲရပါသည်။ ဝါရှင်တန် ပြည်နယ်ပြင်ပသို့ အထိုက်အလျောက်ကြာသော ကာလတစ်ခုကြာခရီးသွားမည်ဆိုလျှင် ၎င်းကို ဖွင့်ထားရန် တိုက်တွန်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရှိနိုင်သောသတိပေးမှုများ ကို ဖွင့်ထားလျှင် WA Notify မဟုတ်သော အခြား ထိတွေ့မှုအကြောင်းကြားစာ နည်းပညာရှိသော နေရာတစ်ခုသို့သွားလျှင်လည်း အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိနိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အိုင်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည် နယ်မြေများစွာကိုထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း တစ်ကြိမ်တွင် နယ်မြေတစ်ခုတွင်သာ အသုံးပြုနေကြောင်း သတ်မှတ်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နယ်မြေအသစ်တစ်ခုကို အသက်သွင်းရန်အတွက် နယ်မြေတစ်ခုကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အန်းဒရိုက်အသုံးပြုသူများသည် ပြည်နယ်မျိုးစုံအတွက် WA Notify ကဲ့သို့သော ထိတွေ့မိမှုအကြောင်းကြားစာ အက်ပ်စ်များကို ထည့်သွင်းထားနိုင်သော်လည်း WA Notify နှင့် ကိုက်ညီသော နည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် အက်ပ်စ်အတွက်သာ အသက်ဝင်နေရန် သတ်မှတ်ရေးဆွဲထားပါသည်။
WA Notify ကို အသုံးပြုရန် ဖွင့်ပေးရမည်လား။
လိုအပ်ပါသည်။ WA Notify သည် အခမဲ့ နှင့် မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပိတ်ထားလိုက်နိုင်ပါသည်။ အက်ပ်စ်ကို ပိတ်ထားရုံ သို့မဟုတ် ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်ပါသည်။ အနီးအနားရှိ အသုံးပြုသူများထံမှ သိမ်းဆည်းထားသော ကျပန်းကုဒ်များအားလုံးကို ဖျက်ပစ်လိုက်မည် ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ရယူနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
WA Notify သည် ထိတွေ့မိသူကို ခြေရာခံ အက်ပ်စ် တစ်ခုလား။
မဟုတ်ပါ။ WA Notify သည် သင့်အနီးအနားတွင်ရှိသောသူများကို ခြေရာခံမလိုက်သလို အချက်အလက်များကိုလည်း နောင်ယောင်ခံမလိုက်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် “ခြေရာခံလိုက်ခြင်း” ကို မပြုလုပ်ပါ။ ခြေရာခံလိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုဗစ်-19 ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သော သူတစ်ယောက်နှင့် ထိတွေ့မိခဲ့နိုင်သော လူတိုင်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါသည်။ အက်ပ်စ်သည် မည်သည့် တစ်ကိုယ်ရေ အချက်အလက်ကိုမျှ စုဆောင်း သို့မဟုတ် ဖလှယ်ခြင်း မပြုလုပ်သဖြင့် သင်မည်သူနှင့်ထိတွေ့မိသလဲကို မည်သူကမျှ သိရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
သင်သည် နောင်တွင် ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် WA Notify အသုံးပြုသူနောက်တစ်ယောက်နားတွင် အချိန်တစ်ခုကြာရှိနေခဲ့ပါက ထိတွေ့မှု ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ခပ်ခွာခွာနေခြင်း နှင့် ကိုဗစ်-19 ပိုးကူးစက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး နှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာများ) (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) မှ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိတွေ့မိမှုတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ရန် WA Notifyသည် CDC ၏ အနီးကပ်ထိတွေ့မိမှု တစ်ခု၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အေလိုဂသမ် တစ်ခုကို အသုံးပြုပါသည် -6ပေ (2 မီတာ)အတွင်း 15 မိနစ် သို့မဟုတ် ပိုများသော ကူးစက်ခံရချိန် - ၎င်းကိုလည်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရာရှိများက ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ကျွနုပ်တွင် ထိတွေ့မှု ရှိကြောင်း WA Notify က ပြောလာပါက ဘာဆက်ဖြစ်မည်နည်း။
အကယ်၍ WA Notify က သင်သည် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါက သင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုသည့်အကြောင်း အချက်အလက်များပါသည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်ထဲသို့ လမ်းပြပေးမည့် အကြောင်းကြားစာတစ်စောင် ဖုန်းထဲသို့ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ယင်းတွင် ဘယ်နေရာတွင် ဘယ်လိုစစ်ဆေးခံရမလဲ၊ သင်နှင့် အခြားသူများ ကူးစက်မခံရအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ နှင့် အခြားမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် အရင်းအမြစ်များ ပါ၀င်ပါလိမ့်မည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်ထဲပါသော အကြောင်းအရာ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ရှု့လိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျွနု်ပ်တွင် ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးရှိကြောင်း လူတွေသိသွားကြမလား။
မသိနိုင်ပါ။ WA Notify က သင့်အချက်အလက်များကို ဘယ်သူနှင့်မျှ မမျှပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ေယာက်က ထိတွေ့မှုရှိနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိလျှင် ၄င်းတို့အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော 14 ရက်အတွင်းက ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူနှင့် ထိတွေ့မိခဲ့ကြောင်းကိုသာ သိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့အနေဖြင့် ဘယ်သူနှင့် ဘယ်နေရာမှာ ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
WA Notify အတွက် ပိုက်ဆံပေးရမလား။
မပေးရပါ။ WA Notify သည် အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
WA Notify က ၀ါရှင်တန် ပြည်နယ်ကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။
ကျွနုပ် ပြည်နယ်ပြင်ပသို့ ခရီးသွားနေလျှင် WA Notify က အလုပ်လုပ်မည်လား။
လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် Apple/Google နည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် အက်ပ်စ်ရှိသည့် ပြည်နယ်သို့ ခရီးသွားလျှင် သင့်ဖုန်းသည် ၄င်းပြည်နယ်တွင်းရှိ အခြားသော အသုံးပြုသူများနှင့် ကျပန်းကုဒ်များကို ဆက်လက်ဖလှယ်နေပါလိမ့်မည်။ သင့်အက်ပ်စ်ဆက်တင်များ ထဲတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ ပြောင်းလဲရန် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍သင်သည် ၀ါရှင်တန် ပြည်နယ်ပြင်ပသို့ ခရီးရှည်သွားမည်ဆိုပါက ပြည်နယ်အသစ်တွင် ဒေသန္တရ အထောက်အပံ့ နှင့် သတိပေးမှုများအကြောင်းကို လေ့လာသင့်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့် ထိတွေ့မှု ခြေရာခံခြင်း နှင WA Notify နှစ်မျိုးစလုံး လိုရပါသနည်း။
ထိတွေ့မှု ခြေရာခံခြင်းသည် အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အသုံး၀င်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ WA Notify က ဤအလုပ်ကို အမည်မသိအနေဖြင့် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤတွင် ဥပမာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပါက အစိုးရကျန်းမာရေး အရာရှိက သင့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး လတ်တလော သင်၏ အနီးကပ်ထိတွေ့မိသူများအကြောင်းကို မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် အတူထိုင်လာသည့် သူစိမ်းတစ်ယောက်အကြောင်းကို သင်သိနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး WA Notify ကို အသုံးပြုပါက ဘတ်စ်ကားပေါ်မှ လူစိမ်းက ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ ထိတွေ့မိနိုင်မှုကို သတိပေးလိုက်နိုင်ပြီး ကိုဗစ်-19 ပိုးကို သူတို့၏ မိတ်ဆွေ နှင့် မိသားစုများထဲ မပျံ့သွားအောင် ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်များကို လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ လက်ဆေးခြင်း နှင့် နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့ပင် တစ်ခုချင်းစီသည် ကိုဗစ်-19 ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး အားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ပါက ပိုမိုထိရောက်ပါလိမ့်မည်။
အခြားအသုံးပြုသူများကို အကြောင်းကြားရန် WA Notify က အချိန်ဘယ်လောက်ယူရသလဲ။
အခြားအသုံးပြုသူတစ်ယောက် ထံမှ ကိုဗစ်-19 နှင့်ထိတွေ့မိသော အသုံးပြုသူများသည် ကိုဗစ်- ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိသော အသုံးပြုသူက အခြား WA Notify အသုံးပြုသူများကို မည်သူမျှမသိစေဘဲ သတိပေးရန် WA Notify ထဲရှိ အဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။
WA Notify ထံမှ သတိပေးစာ အကြိမ်ကြိမ် ရခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ကျွနုပ် တွင် ကိုဗစ် ရောဂါပိုးရှိနေပါက WA Notify ကို ဘယ်လို ပြောရမလဲ။
သင်တွင ်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး Washington State Department of Health(DOH, ဝါရှင်တန် ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန) သို့မဟုတ် သင့် ထံလာရောက်လာသော ဒေသန္တရကျန်းမာရေးအာဏာပိုင် မှ တစ်ယောက်ယောက်ကလည်း သင်သည် WA Notify ကို အသုံးပြုနေခြင်းရှိမရှိ မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ သင်တွင်ရှိနေပါက သူတို့က သင့်အား အတည်ပြုလင့်ခ် နှင့်/သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာ တစ်ခုကို ပို့ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး WA Notify ထဲသို့ ၎င်းကို ရိုက်ထည့်ရန် အဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ လင့်ခ် သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာသည် သင့်ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်နှင့် ချည်နှောင်ထားခြင်း မရှိပါ။ DOH သည် သင်က ယင်းအဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်လျှင် ထိတွေ့မိသည့်အကြောင်း အက်ပ်စ်က အကြောင်းကြားမည့်သူများအကြောင်းကို သိစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာတွင် သင့်အကြောင်းမည်သည့်အချက်အလက်မျှ ပါဝင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ WA Notify ထဲတွင် လူများမျာက ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ ၎င်းတို့၏ ရလဒ်တွေကို အတည်ပြုကြလေလေ ကိုဗစ်-19 ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ပိုကောင်းကောင်း ကာကွယ်နိုင်လေဖြစ်ပါသည်။
သင့်တွင် ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး WA Notify, ထဲတွင် မည်သူမျှမသိစေဘဲ သင့်ရလဒ်ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်နေသေးလျှင် “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results(အိမ်တွင် ကိုဗစ်-19 စစ်ဆေးရလဒ်အရ ပိုးတွေ့သူများအတွက် အတည်ပြုကုဒ်တောင်းခံနည်း) ”အပိုင်းအား WA Notify အသုံးပြုသူများအား ထိတွေ့မိနိုင်မှုကို အခြားသူများကို မည်သူမျှမသိစေဘဲ အကြောင်းကြားရန် အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုကို ရယူရန် တောင်းဆိုရန် အဆင့်များအတွက် ကိုးကားပါ။
WA Notify, တွင် သင့်အတည်ပြုကုဒ်ကို တောင်းဆိုပြီးလျှင် ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်း , 1-800-525-0127 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပါ ထို့နောက် သင့် ပိုးတွေ့ကြောင်းရလဒ်ကို DOH. ကို အစီရင်ခံပါ။
WA Notify ကို ကျွနုပ်၏ ဖုန်းထဲ ထည့်ပြီးနောက် ကျွနုပ်လုပ်ရမည်များ ရှိပါသေးသလား။
အာက်ပါအခြေအနေများတွင်သာ ထပ်ဆောင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင့်တွင် ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချိန် သို့မဟုတ်
သင်သည် ထိတွေ့မှုရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိချိန်။
သင်တွင်ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးWashington State Department of Health (DOH) သို့မဟုတ် သင့် ထံလာရောက်လာသော ဒေသန္တရကျန်းမာရေးအာဏာပိုင် မှ တစ်ယောက်ယောက်ကလည်း သင်သည် WA Notify.ကို အသုံးပြုနေခြင်းရှိမရှိ မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။သင်တွင်ရှိနေပါက သူတို့က သင့်အား အတည်ပြုလင့်ခ် နှင့်/သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာ တစ်ခုကို ပို့ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး WA Notify ထဲသို့ ၎င်းကို ရိုက်ထည့်ရန် အဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ လင့်ခ် သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာသည် သင့်ပုဂ္ဂလိက အချက်အလက်နှင့် ချည်နှောင်ထားခြင်း မရှိပါ။ DOH သည် ထိတွေ့မိသည့်အကြောင်း အက်ပ်စ်က အကြောင်းကြားမည့်သူများအကြောင်းကို သိစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာတွင် သင့်အကြောင်းမည်သည့်အချက်အလက်မျှ ပါဝင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ WA Notify ထဲတွင် လူများမျာက ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ ၎င်းတို့၏ ရလဒ်တွေကို အတည်ပြုကြလေလေ ကိုဗစ်-19 ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ပိုကောင်းကောင်း ကာကွယ်နိုင်လေဖြစ်ပါသည်။
သင့်တွင် ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုလိုအပ်လျှင် “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results(အိမ်တွင် ကိုဗစ်-19 စစ်ဆေးရလဒ်အရ ပိုးတွေ့သူများအတွက် အတည်ပြုကုဒ်တောင်းခံနည်း) ”အပိုင်းအား WA Notify အသုံးပြုသူများအား ထိတွေ့မိနိုင်မှုကို အခြားသူများကို မည်သူမျှမသိစေဘဲ အကြောင်းကြားရန် အတည်ပြုကုဒ်တစ်ခုကို ရယူရန် တောင်းဆိုရန် ကိုးကားပါ။
WA Notify, တွင် သင့်အတည်ပြုကုဒ်ကို တောင်းဆိုပြီးလျှင် ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်း , 1-800-525-0127 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပါ ထို့နောက် သင့် ပိုးတွေ့ကြောင်းရလဒ်ကို DOH ကို အစီရင်ခံပါ။
အကယ်၍ WA Notify က သင်သည် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါက သင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုသည့်အကြောင်း အချက်အလက်များပါသည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်ထဲသို့ လမ်းပြပေးမည့် အကြောင်းကြားစာတစ်စောင် ဖုန်းထဲသို့ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ယင်းတွင် ဘယ်နေရာတွင် ဘယ်လိုစစ်ဆေးခံရမလဲ၊ သင်နှင့် အခြားသူများ ကူးစက်မခံရအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ နှင့် အခြားမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် အရင်းအမြစ်များ ပါ၀င်ပါလိမ့်မည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်ထဲပါသော အကြောင်းအရာ နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ရှု့လိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းကြားစာထဲတွင် သင်ထိတွေ့မိသူ အကြောင်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့မိသည့် နေရာအကြောင်း ပါလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ လုံး၀ အမည်မသိ ဖြစ်ပါသည်။
WA Notify က ဘက်ထရီစားလား သို့မဟုတ် အင်တာနက်ဘေလ် အများကြီး ကုန်မလား။
မစားပါ၊ မကုန်ပါ။ သင့် အင်တာနက်ဘေလ် နှင့် ဘက်ထရီ အစားအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် Bluetooth Low Energy technology ကို အသုံးပြုပြီး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်။
WA Notify အလုပ်လုပ်ရန် ဘလူးတုဒ်ကို ဖွင့်ထားပေးဖို့ လိုပါသလား။
လိုအပ်ပါသည်။ WA Notify သည် Bluetooth Low Energy ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် အနီးအနားရှိ အခြားအသုံးပြုသူများကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် ဘလူးတုဒ်ကို အမြဲတမ်းဖွင့်ပေးထားရပါမည်။
WA Notify ကို အမြဲဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသလား။
မလိုအပ်ပါ။ WA Notify က နောက်ခံထဲတွင် အလုပ်လုပ်နေနိုင်ပါသည်။
WA Notify သည် နည်းနည်းပိုဟောင်းနေသော စမတ်ဖုန်းများထဲတွင် အလုပ်လုပ်ပါသလား။
အိုင်ဖုန်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ အော်ပရေးရှင်းစနစ်ရှိပါက WA Notify ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အိုင်အိုအက်စ် ဗားရှင်း 13.7 သို့မဟုတ် အသစ်ဗားရှင်းများ (အိုင်ဖုန်း 6s၊ 6s Plus၊ SE သို့မဟုတ် ဖုန်းအသစ်များ)
အိုင်အိုအက်စ် ဗားရှင်း 12.5 (အိုင်ဖုန်း 6၊6Plus၊ 5s)
Android အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Bluetooth Low Energy ကို သုံးလို့ရပြီး Android ဗားရှင်း6(API 23) သို့မဟုတ် ယင်းထက်မြင့်သော ဗားရှင်းရှိသည့် Android စမတ်ဖုန်းများတွင် WA Notify ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
WA Notify ကို အသုံးပြုရန် အသက် 18 နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်ဖို့ လိုပါသလား။
မလိုပါ။ WA Notify က သင့်အသက်ကို မသိပါ သို့မဟုတ် မစစ်ဆေးပါ။
ကျွနုပ်သည် အခြားသူတစ်ယောက်နှင့် ဖုန်းတစ်လုံးထဲပေါင်းသုံးနေပါက ဤနည်းပညာက အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား။
WA Notify က ထိတွေ့မှုရှိနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် မည်သူက ဖုန်းကို အသုံးပြုနေကြောင်း မခွဲခြားပေးနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ဖုန်းကိုမျှသုံးနေပါပြီး ကိုဗစ်-19 ထိတွေ့မှုရှိနိုင်ကြောင်း WA Notify က ဖော်ပြနေပါက ဖုန်းကို အသုံးပြုသူအားလုံးသည် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများ၏ လမ်းညွှန်မှုကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။COVID-19.
WA Notify သည် iPads သို့မဟုတ် စမတ်နာရီ များထဲတွင် အလုပ်လုပ်ပါသလား။
မလုပ်ပါ။ ထိတွေ့မှု အကြောင်းကြားစာ မှုဘောင်သည် စမတ်ဖုန်းများအတွက်သာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး iPads သို့မဟုတ် တက်ဘလက်များပေါ်တွင် အလုပ်မလုပ်ပါ။
စမတ်ဖုန်းမရှိသောသူများ ဤနည်းပညာကို လက်လှမ်းမီစေရန်အတွက် ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ် အနေဖြင့် ဘာတွေကို လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။
WA Notify သည် ကိုဗစ်-19 ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် ကူညီနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ စမတ်ဖုန်းမရှိလည်းဘဲ ထိတွေ့မိမှုကို ခြေရာခံလိုက်ခြင်း နှင့် အခြား ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်နေ ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိစေပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးများသည် ကိုဗစ်-19 ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ခပ်ခွာခွာနေခြင်း နှင့် လူစုလူဝေးအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ခြင်းတို့ခြင်းအားဖြင့်လည်း ကိုဗစ်-19 ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ၏ Lifeline program (ဘဝတစ်သက်တာ အစီအစဉ်) က အကျုံးဝင်သောသူများအတွက် လစဉ်ဖုန်းဘေလ်ဖိုးကို ထုတ်ပေးနေပါသည်။ အချို့သော ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သူ ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက အခမဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ထုတ်ပေးနေပါသည်။ အစီအစဉ်၊ အကျုံးဝင်သူများ၊ လျှောက်ထားရမည်နည်း နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သူ ကြိုးမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် (အင်္ဂလိပ်လိုသာ)
မှတ်ထားရမည်မှာ ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးအထိုးခံခြင်းသည် ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ဘာဖြစ်လို့ WA Notify က ဘက်ထရီ အားကို အများကြီးသုံးနေတယ်လို့ ထင်ရတာလဲ။
တကယ်တော့ ၄င်းသည် ဘက်ထရီမစားပါ။ သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ ဘက်ထရီအသုံးပြုခြင်း တွင် WA Notify ကဲ့သို့သော အက်ပ်စ်များ နေ့စဥ်အသုံးပြုသည့် ဘက်ထရီပမာဏကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အက်ပ်စ်အများစုသည် ညဘက်တွင် အလုပ်မလုပ်ကြပါ။ WA Notify သည်လည်း အလုပ်မလုပ်ပါ သို့သော် သင့်အား ထိတွေ့မိမှုရှိပါက သတိပေးနိုင်စေရန် ရောဂါပိုးရှိသောသူများနှင့် တိုက်စစ်ရန်အတွက် ၄င်းက နာရီအနည်းငယ်ကြာလျှင်တစ်ကြိမ် ကျပန်းကုဒ်များကို စစ်ဆေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဥပမာ သင်အိပ်နေသော ညဘက်တွင် အခြားအက်ပ်စ်များ အလုပ်မလုပ်ချိန်တွင် WA Notify က ၄င်းအချိန်တွင် ပိုများသော အသုံးပြုထား ဘက်ထရီရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုပြနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်နေခြင်းက WA Notify သည် ဘက်ထရီအလွန်စားသည်ဟု မဆိုလိုပါ - ဘက်ထရီ ပမာဏ အနည်းငယ်၏ ပိုများသော ရာခိုင်နှုန်းကို အသုံးပြုထားသည်ဟုသာ ဆိုလိုပါသည်။
ဝါရှင်တန် က WA Notify ကို ဘာသာစကား 30 ကျော်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ဘာ့ကြောင့် Google Play Store ထဲတွင် အင်္ဂလိပ် နှင့် စပိန်ဘာသာဖြင့်သာတွေ့နေရပါသလဲ။
WA Notify သည် အသုံးပြုသူတစ်ယောက်၏ ဖုန်းတွင် အဓိကသုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာစကားပေါ်တွင် အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်ပါသည်။ WA Notify တွင် ဗားရှင်းတစ်ခုထဲသာရှိသော်လည်း ပေါ်လာသည့်အရာများ - ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာ ဥပမာ - သည် ဝါရှင်တန်က အကောင်အထည်ဖော်ထားသော အသုံးပြုသူ၏ ပိုလိုလားသော ဘာသာစကား အမျိုး 30 ကျော်ဖြင့် ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ် အကြောင်းကြားစာ နှင့်/သို့မဟုတ် စာသားတစ်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့သော်လည်း စစ်ဆေးခဲ့သူက ကျွန်ုပ်၏ မိသားစု သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်ဖြစ်နေပါသည်။ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။
ပိုးရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသော WA Notify အသုံးပြုသူသည် ထိတွေ့မိနိုင်သော အခြားအသုံးပြုသူများကို ဘယ်သူမှမသိစေဘဲ သတိပေးရန် အဆင့်များကို လိုက်နာသင့်ပါသည် ထို့အတွက် သင့်အတွက် မရည်ရွယ်သော စာသားများ သို့မဟုတ် အကြောင်းကြားစာများကို လျစ်လျူရှု့သင့်ပါသည်။
သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်သည် WA Notifyအသုံးပြုသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ ပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး WA Notify ထဲတွင် ၎င်းတို့၏ ရလဒ်ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်နေသေးလျှင် သူတို့သည် “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results(အိမ်တွင် ကိုဗစ်-19 စစ်ဆေးရလဒ်အရ ပိုးတွေ့သူများအတွက် အတည်ပြုကုဒ်တောင်းခံနည်း)” ကို ဤစာမျက်နှာ၏ အပိုင်း ရှိ အဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဆေးကောင်တာမှ ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးသော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ပိုးရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက အဖြေကို သိရသည်နှင့် ချက်ချင်း ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်းဖြစ်သော 1-800-525-0127 ကို ဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပြီး (စပိန်လိုပြောလိုပါက7ကို နှိပ်ပါ) ဖုန်းဆက်သင့်ပါသည်။ ဟော့လိုင်း နာရီကို သိရှိရန် Contact Us(ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်မည်) စာမျက်နှာ ကို ဝင်ကြည့်ပါ။ ဘာသာစကား အကူအညီများလည်း ရှိပါသည်။
အကြောင်းကြားစာကို တို့ရန် သို့မဟုတ် အတည်ပြုချက် လင့်ခ်ကို အသက်သွင်းရန် ကျွန်ုပ် အချိန် ဘယ်လောက်ရပါသလဲ။
WA Notify ရှိ အခြားသူများကို အကြောင်းကြားရန် အဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကြောင်းကြားစာ သို့မဟုတ် စာသား မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး အချိန် 24 နာရီ ရှိပါသည်။ သင်သည် အကြောင်းကြားချက် ကို တို့လို့မရလျှင် သို့မဟုတ် ၎င်းအချိန်အတွင်းတွင် အတည်ပြုလင့်ခ်ကို ကလစ်လုပ်လို့မရလျှင် သင်သည် WA Notifyတွင် “(How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results(အိမ်တွင် ကိုဗစ်-19 စစ်ဆေးရလဒ်အရ ပိုးတွေ့သူများအတွက် အတည်ပြုကုဒ်တောင်းခံနည်း) ကို ဤစာမျက်နှာ၏ အပိုင်း ရှိ အဆင့်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ WA Notifyတွင် သင့်အတည်ပြုကုဒ်ကို တောင်းဆိုပြီးလျှင် ပြည်နယ် ကိုဗစ်-19 ဟော့လိုင်း , 1-800-525-0127, ကို ဖုန်းဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပါ ထို့နောက် သင့် ပိုးတွေ့ကြောင်းရလဒ်ကို DOH ကို အစီရင်ခံပါ။ သင်သည် DOH မှတစ်ယောက်ယောက် သို့မဟုတ် သင့်ကိုဗစ်-19 အဖြေနှင့်ပတ်သက်ပြီး လာတွေ့သော သင့် ဒေသန္တရကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်ထံမှလည်း လင့်ခ်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
၀ါရှင်တန် က ဘာကြောင့် ဤနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရသလဲ။
၀ါရှင်တန်သည် လုံခြုံရေး နှင့် မြို့ပြလွတ်လပ်ခွင့် ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းမျိုးစုံမှ အဖွဲ့၀င်များ ပါ၀င်သည့် ပြည်နယ်လေ့လာရေး အုပ်စုကို ဖွဲ့စည်းပြီး Apple/Google ဖြေရှင်းနည်းလမ်းကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအုပ်စုက နည်းလမ်း၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အကောင်းမွန်ဆုံး အချက်အလက် အကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း နှင့် အခြားပြည်နယ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်မှုတို့အပေါ် အခြေခံပြီး အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းအကြံပေးထားပါသည်။
WA Notifyထဲတွင် ထိတွေ့မိသောရက် ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။
Exposure Notifications(ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာများ) ကို ရွေးချယ်ပါ သို့မဟုတ် ရှာဖွေအကွက်တွင် Exposure Notifications(ထိတွေ့မိမှု အကြောင်းကြားစာများ) ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။
သင်ထိတွေ့မိခဲ့နိုင်သော ရက်စွဲကို “You may have been exposed to COVID-19(သင်သည် ကိုဗစ်-19 ကို ထိတွေ့မိနိုင်သည်)”အောက်တွင် ပြထားပါလိမ့်မည်။
WA Notify အက်ပ်စ် ကို ဖွင့်ပါ။
“Possible exposure reported (အစီရင်ခံထားရသော ထိတွေ့မိနိုင်မှု)”အောက်ရှိ See Details (အသေးစိတ်ကြည့်မည်) ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်ထိတွေ့မိခဲ့နိုင်သော ရက်စွဲကို “Possible Exposure Date(ထိတွေ့မိနိုင်သော ရက်စွဲ)”အောက်တွင် ပြထားပါလိမ့်မည်။